Auto Spark Plug, vondrona fandrefesana solika, Piston Pins - AO-JUN
Fitaovana fandrefesana solika
Tongasoa eto amin'ny orinasanay
Iridium, Platinum, Entana maro isan-karazany
SCV Valve, Regulater amin'ny tsindry solika
Module Ignition, avo lenta
Paompy lasantsy, Pistons, Valve fanampiana ary maro hafa
Ny piston'i WZAJ dia kalitao OE ary mitovy fiasa OE lehibe toy ny làlan'ny peratra voaloa mba hanomezana toky ny fanamafisana ny peratra sy ny fanaraha-maso ny solika, ary koa ny volavolan-dalàna mifehy ny fanitarana kely mba hampihena ny tabataban'ny motera, ny fitafiana, ny entona ary ny fanatsarana ny fifehezana ny solika. Matetika ny set dia misy piston sy paingotra piston.
Ny andiana iridium an'ny WZAJ no fanampim-panazavana farany amin'ny filaharan'ny plug-dry zareo. Ny elektroda afovoany tariby manify sy ny elektroda vita amin'ny tany mihombo dia mampitombo ny tsy fandriam-pahalemana ary mampihena ny famonoana afo. Ny lasopy elektrika vita amin'ny vy iridium tipped center electrode sy ny iridium-platinum alloy tipped ground electrode dia mampiroborobo ny faharetana sy ny fiainana lava. Ny varahina varahina dia manampy amin'ny fisorohana ny mialoha ny firorohana sy ny fanodinkodinana. Ny akorandriaka vita amin'ny nikela sy kofehy mihorona dia manome fiarovana fanoherana ny fihazonana sy hakamoana. Ny insulator ribbed dia manakana ny flashover.
UNIT METERINGA FUEL
Ny singa metering WZAJ dia vita amin'ny fenitra henjana mba hahazoana antoka fa avo lenta ny vokatra tsirairay. WZAJ dia mamatsy ny ankamaroan'ny valves SCV, valves fandrefesana solika ary valves fanalefahana solika
COILS TSY MANAIKY
Ny coils an'ny WZAJ dia natao mba hametrahana mora foana ary misy varahina avo lenta ho an'ny fampiharana manokana, famoahana ambany ary famoahana angovo avo. Ny famolavolana fehikibo tokana dia hampihena ny habeny sy ny lanjany raha tsy mahafoy ny kalitaony. Ny coil tsirairay dia natao hanafoanana ny tsy fahombiazan'ny afo ary hanomezana herinaratra ambony indrindra.
Wenzhou AO-JUN Auto Parts Co ,. Ltd. dia naorina tamin'ny 2014 ary nandany ny orinasa tamin'ny 2016. Izy io dia mpamatsy faritra misy motera mifandraika amin'ny motera ary manolo-tena hanome faritra avo lenta ho an'ny mpivarotra manerantany.
Taorian'ny taona vitsivitsy nivoarana mitohy, AO-JUN dia lasa mpanamboatra manana fahaiza-mamatsy mahery. Eo amin'ny sehatry ny rafitra fandrehitra, ny AO-JUN dia tsy vitan'ny mamatsy karazana plug amin'ny alàlan'ny vidiny mirindra indrindra, fa manome coil ignition ambony ihany koa.
Ny lafo kokoa no tsara kokoa?
Fampidirana momba ny tsatokely
Fampidirana momba ny Pistons
Distrikan'ny indostria Hantian, Tanànan'i Tangxia, Tanànan'i Rui'an, faritanin'i Zhejiang, Sina